(Ndakhe) Ixesha loBomi bam nguBill Medley noJennifer Warnes - Okunye
Amanani Endlela Yobomi
Amakhadi Okufunda Ngepsychic
(Ndakhe) Ixesha loBomi bam nguBill Medley noJennifer Warnes
Oku kwabhalwa ngu-Franke Previte ka Franke kunye ne Knockouts, owabetha u # 10 ngo 'Sweetheart' ngo-1981. Ukudanisa mdaka , U-Patrick Swayze noJennifer Grey. Ukukhumbula kuqala ukukhumbula ukufumanisa kuSwayze ukuba ibaluleke kangakanani idemo yakhe kwingoma: 'Undixelele ukuba Ukudanisa mdaka umdaniso wokugqibela wokudanisa wadutyulwa kwidemo yam yantlandlolo '(Ndinexesha lobomi bam.' Ndayicula ingoma kunye neqabane lam lesibini, uRachele Cappelli. UPatrick wachaza ukuba imovie yacocwa ngokulandelelana kwaye indawo yokugqibela yayiyinto yokuqala abayidubulayo. Kwaye, bekukho ukukhwela okuninzi ukuze kulunge. Uthe kubalulekile ukuba yena, uJennifer kunye nabo bonke abanye abantu abafake imiboniso bhanyabhanya ukuba babonakalise ubuhlobo kunye nokuba idemo ibiyinxalenye enkulu yokubanceda benze kanye loo nto. Owona mboniso ukhumbulekayo ngokwenene wawufakwe kwidemo yethu '(Ndakhe) Ixesha loBomi bam.' '
Ukubukela lo mboniso okokuqala, u-Previte uthi, 'Iimvakalelo zam beziphezulu. Ingaba ndingathini? Ukugodola. '
Inkqubo ye- Ukudanisa mdaka Ingoma yaveliswa nguJimmy Ienner, owayecinga ngoFranke Previte xa efuna iingoma zebhanyabhanya. Previte usixelele: 'Ndifumene umnxeba ovela kuJimmy Ienner, owayeyintloko yeRekhodi yeMillennium, ileyibheli yam noFranke kunye neKnockout. UJimmy wandicela ukuba ndibhale ingoma kule bhanyabhanya incinci ibizwa ngokuba Ukudanisa mdaka . Ndimxelele ukuba andinaxesha wathi, 'Yenza ixesha. Oku kungabutshintsha ubomi bakho. ''
Owayesakuba ngumlingane ka-Franke uJohn DeNicola kunye nomhlobo wakhe uDon Marowitz beza nomculo wale ngoma. U-Previte uthi, 'Ndifumene ingoma evela kuJohn noDonny kwaye ndabhala ingoma kunye nengoma yemoto ngelixa ndiqhuba eGarden State Parkway, ndisiya kwiseshoni yenye ingoma.'
Uninzi lweengoma zepop aziqali nge-chorus, kodwa le ngoma kwafuneka ilingane neendlela ezithile zomdlalo bhanyabhanya: kwafuneka iqale kancinci, igqibe ngokukhawuleza, kwaye ibethe inkosi. Previte yongezwa kudliwanondlebe lwethu: 'Indawo yayiyimizuzu esixhenxe ubude. Bafuna ingoma ukuba ibe nde nje. Ke siqale umkhondo nge-chorus ngaphambili ngaphambili ngesiqingatha sexesha ukwenza imo ecothayo ngaphambi kokubethwa kwale vesi.
Xa oku kugqityiweyo, Previte noDeNicola bagqibe 'Amehlo Alambile,' ingoma eyayicwangciselwe i-Previte solo LP, kodwa yabuyela kwi Ukudanisa mdaka ifilimu.
Kwangoko, ingoma kaLionel Richie yayibekelwe indawo yomdaniso omkhulu kumdlalo bhanyabhanya, kodwa umdwebi wefilimu, uKenny Ortega, wayiqhula ngokuthanda '(bendinalo) ixesha lobomi bam.' Yithi Previte, 'Yayiyingoma yokugqibela kwiteyiphu yokugqibela engeniswe ngosuku lokugqibela kumdlalo wokugqibela webhanyabhanya. Kodwa, wonke umntu wayithanda! '
Xa wayexelelwa ukuba u-Ienner wayeceba ukuba noBill Medley ahlabelele le nto, u-Previte wayenemixube edibeneyo. Wayefuna ukuyicula ngokwakhe kumdlalo bhanyabhanya, kodwa uMedley, owayelilungu labazalwana abaLungileyo, wayengomnye weemvumi awayezithanda ngalo lonke ixesha. U-Previte akazange afumane thuba lokucula 'Amehlo alambileyo' kwimovie, nokuba-yabhalwa ngu-Eric Carmen kwaye waba ngowokuqala kwi-Top 5 hit kwiminyaka eyi-12.
UMedley wayengenamdla wokurekhoda istrack single emva kokuba edibene noGladys Knight, 'Ukuthanda ixesha elibolekileyo,' (kuSylvester Stallone's Imfezi ), ibhombu. Akuzange kuncede nokuba uMedley acinge ukuba isihloko sefilimu sivakala 'njengemiboniso bhanyabhanya engalunganga.'
Iinyanga ezimbini zoxinzelelo oluvela ku-Ienner aluzange lutshintshe ingqondo de iseshoni yokurekhoda ecwangcisiweyo yasuswa eNew York yaya eLos Angeles kwaye uJennifer Warnes wavuma ukucula kwiseshoni. UMedley wayengumlandeli omkhulu weWarnes, owasitshintsha isigqibo sakhe, njengemeko. Umzalwana oLungileyo wachaza kudliwanondlebe lwethu lwe-2014: 'Umfazi wam wayelindele umntwana wam, usana lwethu uMcKenna, kwaye ndamthembisa ukuba ndizakubakhona, ke ndiyayala iinyanga ezintathu. Emva koko uPaula wayenomntwana wethu.
Ndiyabulela uThixo ngoJimmy Ienner. Wahlala kum wafowuna wathi, 'Mamela, uJennifer Warnes ufuna ukuyenza ukuba angayenza nawe.' Ndiye ndathetha noJennifer wathi, 'Ewe, masiyenze.' '
Icala le-B elinye lalikukhutshwa kwakhona kukaMickey kunye noSylvia 'Uthando luyinto engaqhelekanga' (# 11 ngo-1957), eyayisetyenziswa Ukudanisa mdaka .
Oku kubethe i-10 ephezulu e-UK-okokuqala ngo-1987 xa Ukudanisa mdaka yakhutshwa kwimidlalo yeqonga, kwaye kwakhona ngo-1990 emva kokuba umboniso bhanyabhanya ubonisiwe kwiTV (yaya kwi # 8 ngeli xesha).
UJennifer Warnes uthelekisa ukucula noBill Medley ukudanisa noFred Astaire. Ngelixa uBill Medley esaziwa kakhulu ngokuba sisiqingatha sabazalwana Abalungileyo, uWarnes naye uye wayifumana eyona mpumelelo yakhe inkulu ngee-duo. Ukongeza kule ngoma, wayenenye itshathi yaseMelika ngo-1982 kunye ' Phezulu Apho Singabakho , 'duet noJoe Cocker ovela Igosa kunye noMnumzana isandi. Waye wabetha yedwa eMelika ngo-1977 enexesha 'elilungileyo lobusuku.'
Oku kuphumelele imbasa yeGrammy ka-1987 yokuSebenza ngokuGqwesileyo kweVocal yi-Duo kunye ne-Oscar yeNgoma yeFilimu eNgcono.
Inkqubo ye- Ukudanisa mdaka I-soundtrack yahlala kwi # 1 kwiitshathi zeBillboard kangangeeveki ezili-18 kwaye ithengise ngaphezulu kweekopi ezingama-48 zezigidi kwihlabathi liphela.
Le yayiculwa nguTaylor Hicks kunye noKhatharine McPhee kwimidlalo yabo yokugqibela ngexesha le-2006 Idol yaseMelika .
NgoSeptemba 8, 2010, idemo yoqobo yale ngoma, kunye ne-remix ngumvelisi uMichael Lloyd, yakhutshwa njengeefayile zedijithali kumzamo wokukhulisa imali yePatrick Swayze Pancreas Cancer Resarch Foundation kwiYunivesithi yaseStanford.
Ukukhutshwa kwesimemo kungqamene neqela le-superstar pop I-Eyed Peas emnyama isekela elinye 'Ixesha (iBit emdaka)' ejikeleze isampulu yale ngoma. Ikwabaleka ngokuhambelana nokuvela kwakhona kukaJennifer Grey njengomntu okhuphisana kakhulu kwi-ABC's Ukudanisa ngeenkwenkwezi , awathi ekugqibeleni waphumelela. Eyona nto indimangalisayo lixesha, utshilo uPrevite. 'Njengokuba siqalile ukusebenza ukulwa nomhlaza kwimemori kaPatrick ngokukhutshwa kweedemo zantlandlolo, okokuqala yayinguJennifer ebuyela eluntwini ngendlela enkulu kumabonwakude, kwaye ngoku i-Black Eyed Peas iza nayo kwaye iyigubungele- konke kumcimbi weeveki. I-Black Eyed Peas izisa inqanaba elitsha lokwazisa ngemizamo yethu yesisa esingazange sayiphupha kwisigidi seminyaka.
'(Ndakhe) Ixesha loBomi bam' ngokwenene yingoma enezinto ezilithoba zobomi. Ukuba neqela elifana ne-Peas liyayinika Ubomi be-10, 11 kunye ne-12. Ingoma ngoku iwelele kwisizukulwana esilandelayo ngendlela enkulu. Kwakungayi kubakho naliphi na iqela, elipholileyo, elihlaziyayo, kunye ne-hip ngaphezu kwe-Black Eyed Peas ukurekhoda. '
UDianna Agron (uQuinn) kunye noChord Overstreet (Sam) badlale le ngoma kumdlalo weTV Glee ngoNovemba 30, 2010, kwangolo suku lucwecwe lwe-Black Eyed Peas albhamu Isiqalo , equkethe 'Ixesha (i-Bit emdaka)' yakhutshwa. Phakathi Glee , I-Peas, kunye nokuphumelela kukaJennifer Grey, le ngoma yavuya kakhulu, yabangela ukuba umbhali wengoma uFranke Previte aququzelele ukhuphiswano olubizwa ngokuba yi-'Dancing With The Demos, 'apho abantu banokwenza umdaniso wabo ngokulandelelana kwingoma ithuba lokuphumelela hlala kwiindawo ezimbini ekuchithelwa kuzo iiholide eNorth Carolina naseVirginia ezazizezona ndawo ziphambili zokufota Ukudanisa mdaka .
Kwimuvi ka-2011 Uyaphambana, Usisiyatha, Uthando. , U-Emma Stone onengcebiso uphelela kwigumbi lakhe lothario, Ryan Gosling. Uza kuba yindoda, kodwa ufuna 'ukuhamba kwakhe okukhulu,' akuchazayo kukunyuka Ukudanisa mdaka . Ngokuqinisekileyo ufumanisa ukuba ayinakuphikiswa; Ubeka ingoma kwaye xa engena ezingalweni zakhe, umnika iSwayze epheleleyo, etywina isivumelwano.
Ngo-2015, le yayisetyenziswa kwindawo ethandwayo Unonophelo lwezempilo kwezorhwebo ebizwa ngokuba 'Yingoma Yethu' apho ingoma iza kunomathotholo kwaye isibini esitshatileyo sithatha isigqibo sokwenza iSwayze / iGrey lift ukusuka Ukudanisa mdaka . Ihamba ngendlela engalunganga, kwaye bagqibela ngokuncokola nogqirha ukuze bafumane unyango ngokwenzakala kwabo.
Ngexesha le-Super Bowl ngo-2018, i-NFL yaqhuba indawo apho le ngoma idlala khona ngelixa uEli Manning no-Odell Beckham Jr. weeNew York Giants baphinde benza Ukudanisa mdaka imeko njengombhiyozo wokuchukumisa. Iqela labo belingenanto ingako yokubhiyozela, bephumelele nje imidlalo emithathu ngelo xesha, ngelixa ezimbini zeentshaba zabo, iFiladelphia Eagles kunye neNew England Patriots, bebambene kumdlalo omkhulu.
Kudliwanondlebe lweNgoma ka-2018 noJennifer Warnes, uthe, 'Ndicinga ukuba yinto eyenzakeleyo esandula ukudubula. Akukho mntu wacinga ukuba inokuba yinto enkulu kangaka. Kwakungummangaliso nje.
Kwaye senze konke okusemandleni ethu, uBill kunye nam. Imovie yayintle- isathandwa kwaye iya kuhlala ikhona. Kodwa ndiye ndacinga ngayo kwaye ndazibuza ukuba kutheni umhlaba wonke uyithanda kakhulu kwaye ndicinga ukuba impendulo kukuba iyonwabile. Ukuba uthatha uvuyo kule ngoma, ayisiyiyo hit.
Kungenxa yoko le nto ukuphakanyiswa kubaluleke kakhulu, yiyo loo nto abafana abakwiNFL bephakamisile: kuba kukho uvuyo olungachazekiyo kwingoma. Andazi ukuba ungawukhomba phi owona mzuzu, kodwa ukuba uthatha uvuyo kule ngoma, ayiyonto intle leyo.
Oku kwasetyenziswa kwindawo ebalulekileyo kumdlalo wokugqibela we-2018 Iinkawu ezili-12 . UCole noRamse bakhetha njengomhobe wabo ngaphambi kokuba baqale umsebenzi osongela ubomi.
Iingoma ze Ndiphila Njani nguLeAnn Rimes
Lyrics for Ndibuyile
Ingoma ka-Adam nge-blink-182
I-California Dreamin 'yiMamas kunye nePapas
Iingoma zikaDu Hast nguRammstein
Iingoma zoBusuku baDala i-Old Dixie ezantsi yi-The Band
Ukuphatha ngcono ngoShawn Mendes
Iingoma zee-Echoes ngu-Pink Floyd
Iingoma zokungena kwiingalo zam nguNick Cave kunye nembewu embi
Iingoma zokuFunda konke malunga nayo (Pt. III) nguEmeli Sandé
Iintyatyambo ziiThe Chainsmokers
Iingoma zikaJenny ezivela kwiBlock nguJennifer Lopez
Amabali Kunye Neengoma Zeculo
Zonke izinto ezincinci amazwi anentsingiselo
ulungile uphefumle ingqondo yam
xa ulele kwaye ubiza i-cab
kwihlabathi jikelele iingoma lisa stansfield
phumla ngo-frankie uya ehollywood
Copyright © Onke Amalungelo Agciniwe | companysolutions.sk